Nhau - PSA oxygen jenareta inoita basa rakakosha mumaindasitiri
PSA okisijeni jenaretainoshandisa zeolite molecular sieve seye adsorbent, uye inoshandisa musimboti wekumanikidza kushambadzira uye kudzikisira desorption kushambadza uye kusunungura okisijeni kubva mumhepo, nokudaro ichiparadzanisa okisijeni kubva kune otomatiki michina. Kupatsanurwa kweO2 uye N2 ne zeolite mamoresi sieve kunoenderana nemusiyano mudiki muhukuru hwakasimba hwemagasi maviri. N2 mamorekuru ane chinokurumidza kupatsanura mwero muiyo micropores ye zeolite molecular sieve, uye O2 mamorekuru ane anononoka kupararira mwero. Tiine kuramba kumhanyisa kwemaindasitiri muitiro, musika kudiwaPSA okisijeni emagetsi inoramba ichiwedzera, uye michina inoita basa rakakosha mumaindasitiri.
Hangzhou OuRui Mhepo Separation Equipment Co, Ltd. inyanzvi mugadziri we cryogenic mweya wekuparadzanisa, VPSA okisijeni yekugadzira chishandiso, yakamanikidza mweya yekuchenesa mudziyo, PSA nitrogen kugadzirwa, okisijeni yekugadzira chishandiso, nitrogen yekuchenesa mudziyo, membrane kupatsanura nitrogen kugadzirwa uye okisijeni yekugadzira chishandiso, magetsi. Pneumatic kudzora vharafu. Tembiricha yekudzora tembiricha. Bvisa mabhizinesi ekugadzira vharuvhu.
1. Nezvekushandisa kweoxygen jenareta mundima yeoksijeni-yakasimbiswa kupisa
Izvo mweya weokisijeni mumhepo ndeye -21%. Iko kupisa kwemafuta mune maindasitiri boilers uye maindasitiri kilns anoshandawo pasi peichi chemukati chemhepo. Kudzidzira kwakaratidza kuti kana huwandu hwegasi okisijeni mumoto wekubhaira ukasvika kupfuura 25%, iyo yekuchengetedza simba yakakwira se20%; iyo boiler yekutanga-up yekupisa nguva ipfupiswa ne 1 / 2-2 / 3. Iko kukosheswa kweoksijeni ndiko kushandiswa kwenzira dzepanyama dzekuunganidza iyo oxygen mumhepo, kuitira kuti okisijeni yekuvandudza zvemukati mune yakaunganidzwa gasi iri 25% -30%.
2. Nezve iko kushandiswa kweoxygen jenareta mundima yekugadzira mapepa
Nekuvandudzwa kwenyika kwezvakatarisirwa zvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza kwemaitiro ekugadzira mapepa, izvo zvinodiwa nemuchena mapurp ((kusanganisira huni pulp, tsanga pulp, uye bamboo pulp) zviri kuwedzerawo. Iyo yepakutanga klorini yakacheneswa pulp yekugadzira mutsara inofanirwa kushandurwa zvishoma nezvishoma kuita klorini-isina bhuru yakashambadzirwa yemuguru yekugadzira mutsara; Iyo itsva pulp yekugadzira mutsara inoda klorini-isina kubhenesa maitiro, uye pulp kuchenesa hakudi yakachena-yakachena okisijeni. Iyo okisijeni inogadzirwa nekumanikidza swing adsorption okisijeni jenareta inosangana nezvinodiwa, izvo zvine hupfumi uye zvakatipoteredza zvine hushamwari.
3. Nezve kushandiswa kweoxygen jenareta mumunda weasina-feri kunyungudutsa
Nekugadziriswa kwesimba renyika maindasitiri, isina-feri yekunyungudutsa yakawedzera nekukurumidza mumakore apfuura. Vazhinji vagadziri vatanga kushandisa kumanikidza swing adsorption okisijeni jenareta mukufamba kwekuyerera kweoksijeni pasi kuvhuvhuta mutobvu, mhangura, zinc, uye antimony, uye mune smelters anoshandisa okisijeni leaching yegoridhe uye nickel. Iko kushandiswamusika wePSA oxygen jenareta yakawedzerwa.
Hunhu hwesosi mamoresi anoshandiswa mu PSA okisijeni jenaretainobata chinzvimbo chakakura. Molecular sieve ndiyo musimboti wekumanikidza swing adsorption. Iyo yepamusoro mashandiro uye hupenyu hwehupenyu hwe samorekuru sieve zvine chakanangana nekudzikama kwegoho uye kuchena.